Ny Birao fizahantany afrikanina dia manendry ny minisitry ny fizahantany Cape Verde ho ekipa
Home » Travel Associations News » Ny Birao fizahantany afrikanina dia manendry ny minisitry ny fizahantany Cape Verde ho ekipa
Ny birao fizahantany afrikanina dia faly nanambara ny fanendrena an'i Hon. Jose Gonçalves, Minisitry ny fizahantany Cape Verde, ho an'ny Birao Afrikana misahana ny fizahan-tany (ATB). Izy dia hiasa ao amin'ny filankevitry ny minisitra mipetraka ary ireo tompon'andraikitra voatendry ho an'ny daholobe.
Ny traikefany lehibe teo amin'ny andraikitra mpanolotsaina iraisam-pirenena avo lenta dia misy ny mpanolotsaina zokin'ny praiminisitra, ny minisitra zokiolona ary ny talen'ny orinasa sy andrim-panjakana amin'ny sehatry ny fampandrosoana sy ny tetezamita.
Minisitry ny fizahan-tany sy fitaterana any Cape Verde, ary ny minisitry ny Toekarena an-dranomasina nanomboka ny volana janoary 2018, ary ny minisitry ny toekarena sy ny asa teo aloha1 nandritra ny vanim-potoana aprily 20016 - desambra 2017, José Gonçalves dia manam-pahaizana manokana momba ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina amin'ny varotra, fampiasam-bola ary sehatra tsy miankina manana 30 taona mahery ny traikefa iraisam-pirenena amin'ny fampandrosoana sy fitantanana ny tetikasa.
Ny minisitra Gonçalves, miandraikitra minisitera roa amin'ny nosy roa samy hafa, dia eo amin'ny minisitra zokiolona ao amin'ny Kabinetra ary manara-maso portfolio lehibe misy lafiny toekarena lehibe toy ny fizahan-tany, fitaterana an-dranomasina sy an-dranomasina, toekarena an-dranomasina, ary jono.
Ankoatr'izay, ny Minisitra dia miandraikitra ny maso sy ny maso ivoho ho an'ny maso sy ny masoivoho andrim-panjakana amin'ny faritra izay eo ambany fanaraha-masony ary koa ny torolàlana momba ny orinasam-panjakana na an'ny fanjakana manontolo na ampahany. Anisan'ny zava-bitany matihanina ny minisitra Gonçalves izay nitazona ny anjara asany tamin'ny famolavolana sy fanatanterahana ny programa fanavaozana ara-toekarena an'i Cabo Verde tamin'ny faran'ny taona 1990, nahatonga ny fananganana ny tahirim-bolam-panjakana voalohany ao amin'ny firenena ary avy eo niafara tamin'ny "diplaoma" ofisialin'ny firenena avy any Less Firenena mandroso (LDC) mankany amin'ny Firenena miditra ambany (LMIC) tamin'ny 2008.
Ny zava-bita lehibe iray dia ny anjara asany tamin'ny naha lehiben'ny departemanta faralahy faralahy azy sy ny filoha lefitra mpanampy ao amin'ny Komity mpikarakara ny Lalao Olaimpika Los Angeles 1984 nahomby. Ny minisitra Gonçalves dia mahay teny anglisy, frantsay, espaniola ary portogey. Manana mari-pahaizana PhD avy amin'ny University of California Los Angeles amin'ny Comparative International Education izy ary nahazo diplaoma amin'ny Advanced Management Program avy amin'ny Harvard Business
Ny minisitry ny fizahantany any Ghana dia miditra amin'ny Birao fizahantany afrikanina
Manatevin-daharana ny ezaka ataon'ny Birao Afrikana momba ny fizahantany i Sierra Leone